They Who Are Not Seen(2017) | MM Movie Store
ဆာရာဆိုတဲ့ကောငျမလေးဟာ ငယျစဉျကထဲက ထူးခွားတဲ့စှမျးရညျတဈခုပိုငျဆိုငျထားတယျ…လူမှနျးသိတတျစအရှယျမှာတငျ သသေူတှရေဲ့ ဝိညဉျတှေ နာနာဘဝတှကေို မွငျရတယျ…နရောတကာမှာ နာနာဘာဝတှကေိုမွငျရဖနျမြားလာတော့သူ့အတှကျ သိပျမထူးဆနျးသလိုတောငျဖွဈလာတယျ….
တဈခါတဈရံတော့အသဆေိုးနဲ့ သသေူတှရေဲ့ ပုံစံမြိုးစုံကိုတှမွေ့ငျခြိနျမှာတော့ သှေးပကျြမတတျကွောကျလနျ့မိတာပေါ့…..ဒီအကွောငျးတှကေို မိခငျဖွဈသူကိုပွောပွတော့လညျးသဘာဝလှနျဆိုတော့ ယုံကွညျပေးခဲ့ခွငျးမရှိ…နောကျပိုငျးဘယျလောကျဆိုးလညျးဆိုရငျအခနျးတှငျးမှာတငျ ဝိညဉျပေါငျးစုံက အပွညျ့ရောကျနတေတျတယျ…
သူတို့ကွညျ့ရတာဆာရာဆီက အကူအညီတှလေိုအပျလို့ ပွောပွခငျြနပေုံပဲ…တခွားကလေးတှထေကျခကျခဲတဲ့ဘဝကိုဖွတျသနျးနရေတဲ့ ဆာရာကို နားလညျပေးတဲ့ကောငျလေးသူငယျခငျြးတဈယောကျတော့ရှိတယျ….ဒီသူငယျခငျြးလေးကွောငျ့ပဲ သူမ အတှကျ နကျဖွနျဆိုတာကိုဖွတျသနျးဖို့အားရှိနပေုံပဲ..တဈနတေ့ော့ သူ့သူငယျခငျြးကောငျလေးဟာ ကြောငျးမလာခဲ့ဘူး…
အဲ့ဒီညမှာပဲ သူ့အိပျခနျးထဲကို ကောငျလေးသူငယျခငျြးရောကျလာတယျ…ထူးဆနျးစှာပဲ လကျပငျးကို ဓားနဲ့အလှီးခံလိုကျရသလို သှေးတှပေနျးထှကျလာပွီးပြောကျကှယျသှားတယျ…ဆာရာအတှကျ အခဈြရဆုံးသူငယျခငျြးရဲ့ နိမိတျပွပုံဟာတကယျ့ကိုသှေးပကျြဖှယျရာပါပဲ…ကိုငျး ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး…
ဒီ Horror ကားက သရဲ တစ်ဆတှေကေို နောကျဆုံးမှပွပွီး စိတျဝငျစားအောငျလုပျတာမြိုးမဟုတျဘူး..Jump Scare ပုံစံမြိုးတှလေညျးခြောကျလှနျ့တာမဟုတျဘူး…စစခငျြး သရဲပုံစံမြိုးစုံတှပွေပွီး သိပျမထူးဆနျးသလိုပွသထားတယျ..
သို့ပမေယျ တဖွညျးဖွညျး တဈစိမျ့စိမျ့ထိတျလနျ့ကွောငျ့ရှံလာတာမြိုး…ကွာလေ ဘာဆကျဖွဈမလဲ လနျ့လညျးလနျ့ ဆကျလညျးကွညျ့ခငျြတဲ့ Horror အမြိုးအစားပါ…ခံစားကွညျ့ကွပါဦး…
ဆာရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ ငယ်စဉ်ကထဲက ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်…လူမှန်းသိတတ်စအရွယ်မှာတင် သေသူတွေရဲ့ ဝိညဉ်တွေ နာနာဘဝတွေကို မြင်ရတယ်…နေရာတကာမှာ နာနာဘာဝတွေကိုမြင်ရဖန်များလာတော့သူ့အတွက် သိပ်မထူးဆန်းသလိုတောင်ဖြစ်လာတယ်….
တစ်ခါတစ်ရံတော့အသေဆိုးနဲ့ သေသူတွေရဲ့ ပုံစံမျိုးစုံကိုတွေ့မြင်ချိန်မှာတော့ သွေးပျက်မတတ်ကြောက်လန့်မိတာပေါ့…..ဒီအကြောင်းတွေကို မိခင်ဖြစ်သူကိုပြောပြတော့လည်းသဘာဝလွန်ဆိုတော့ ယုံကြည်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိ…နောက်ပိုင်းဘယ်လောက်ဆိုးလည်းဆိုရင်အခန်းတွင်းမှာတင် ဝိညဉ်ပေါင်းစုံက အပြည့်ရောက်နေတတ်တယ်…
သူတို့ကြည့်ရတာဆာရာဆီက အကူအညီတွေလိုအပ်လို့ ပြောပြချင်နေပုံပဲ…တခြားကလေးတွေထက်ခက်ခဲတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဆာရာကို နားလည်ပေးတဲ့ကောင်လေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တော့ရှိတယ်….ဒီသူငယ်ချင်းလေးကြောင့်ပဲ သူမ အတွက် နက်ဖြန်ဆိုတာကိုဖြတ်သန်းဖို့အားရှိနေပုံပဲ..တစ်နေ့တော့ သူ့သူငယ်ချင်းကောင်လေးဟာ ကျောင်းမလာခဲ့ဘူး…
အဲ့ဒီညမှာပဲ သူ့အိပ်ခန်းထဲကို ကောင်လေးသူငယ်ချင်းရောက်လာတယ်…ထူးဆန်းစွာပဲ လက်ပင်းကို ဓားနဲ့အလှီးခံလိုက်ရသလို သွေးတွေပန်းထွက်လာပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်…ဆာရာအတွက် အချစ်ရဆုံးသူငယ်ချင်းရဲ့ နိမိတ်ပြပုံဟာတကယ့်ကိုသွေးပျက်ဖွယ်ရာပါပဲ…ကိုင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…
ဒီ Horror ကားက သရဲ တစ္ဆေတွေကို နောက်ဆုံးမှပြပြီး စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး..Jump Scare ပုံစံမျိုးတွေလည်းချောက်လှန့်တာမဟုတ်ဘူး…စစချင်း သရဲပုံစံမျိုးစုံတွေပြပြီး သိပ်မထူးဆန်းသလိုပြသထားတယ်..
သို့ပေမယ် တဖြည်းဖြည်း တစ်စိမ့်စိမ့်ထိတ်လန့်ကြောင့်ရွံလာတာမျိုး…ကြာလေ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ လန့်လည်းလန့် ဆက်လည်းကြည့်ချင်တဲ့ Horror အမျိုးအစားပါ…ခံစားကြည့်ကြပါဦး…
9-1-1 (Season 3) ၊ အပိုငျး (၁၄)
Summertime – Link 1